DHAGEYSO:Galmudug iyo Puntland oo ka shiray amniga Gaalkacyo | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Galmudug iyo Puntland oo ka shiray amniga Gaalkacyo
DHAGEYSO:Galmudug iyo Puntland oo ka shiray amniga Gaalkacyo
Waxaa Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ka dhacay Kulan ay isugu yimaadeen Masuuliyiinta Gobolka Mudug ee Maamulada Puntland iyo Galmudug waxayna ka wada hadleen sida ugu haboon ee wadajirka loogu sugi karo amaanka Gobolkaasi Mudug.
Masuuliyiinta ayaa ka wada hadlay iskaashiga xoojinta xiriirka Nabadda Gaalkacyo, Wada shaqeynta Maamulka Degmada Gaalkacyo iyo Ganastada, kor u qaadida Bilicda Magaalada iyo banaynta suuqa bartamaha magaalada Gaalkacy.
Kulanka Waxaa sidoo kale Goob joog ahaa saraakiil Ciidanka Xasalinta magaalada Gaalkacyo, Agaasimaha Madaxtooyada Gaalkacyo, Isuduwaha Wasaaradda Ganacsiga Puntland ee Gobalka Mudug, agaasimaha Canshuuraha Bariga Gobalka Mudug iyo Masuuliyiin kale,
Gabagabadii Kulanka ayaa waxaa laga soo saaray Qadobo dhowr ah ay kamid yihiin,In la dhiso guddi ka kooban labada Maamul degmo iyo Ganastada suuqa dhaxe oo ka shaqeyn doono dib u habeenta suuqa bartamaha magaalada Gaalkacyo.
In laga fogaado wax walba oo wax u dhimi kara Nabada Magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada kale ee gobolka Mudug, in la sii Xoojiyo kulamada Nababada iyo isdhex galka bulshada Gaalkacyo, In si wada jir ah looga wada shaqeeyo bilicda iyo nadaafada magaalada iyo ugu danbayntii in loo sameeyo meelo ay ku Ganacsadaan ganacsatada danyarta ah ee ku ganacsada bartamaha suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo.
Mas’uuliyiinta Gobolka Mudug iyo kuwa degmada Gaalkacyo ee Maamulada Puntland iyo Galmudug oo kulanka ka hadlay ayaa isla Qiray Muhiimada ay leedahay Xoojinta Wadashaqaynta si amaanka Magaalada Gaalkacyo u noqdo mid la isku halayn karo.
Previous articleShiinaha oo joojiyay duulimaadyada dhanka Canada